Sanyiin leencaa kanniin biroon adda ta'uu hin oolu jedhame bosona Baalee keessatti argame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Sanyiin leencaa kanniin biroon adda ta’uu hin oolu jedhame bosona Baalee keessatti...
Sanyiin leencaa kanniin biroon adda ta’uu hin oolu jedhame bosona Baalee keessatti argame
Qorattoonni sanyii leencaa yeroo dheera dura badeera jedhamee amanamaa ture bosona Baalee keessatti argan. Sanyii leencaa kana kaameraa isaatiin kan qabe, Çağan Şekercioğlu, qorataa Yinivarasiitii Utaah fi National Geography dha.
leencaa paarkii bosona Baalee (Oromiyaa)
Leenci bosona Baaleetti argame kuni gam’aa gurraacha qaba. Kana jechuun sanyiin leencaa kuni isa dirree Afrikaa biyyoota akka Keeniyaa fi Tanzaaniyaatti argamuun adda ta’uu hin oolu jedham.
Woggaa dabre leenci naannoo 50’tti tilmaamamu paarkii Alaataash (nannoo Benshaangul) daangaa Suudaanitti argamu keessatti mul’ateera.
Yeroo kanatti waliigalatti sanyii leenca 20,000 hin caalletu guutuu addunyaa irra jiraata jedhameeti kan tilmaamamu. Laakkofsi leencaa yeroodhaa yerotti gadi bu’aa dhufuun isaa sanyiin leencaa gara baduutti dhiyaataara yaaddoo jedhu uumeera.
leenca bosona baalee
Previous articleDaa’imman yeroo dheeraadhaaf manatti hidhaman rakkoo ijaaf saaxilamu jedhu qorattonni
Next articleBoru seenahuu jalaa bayuu feetaa? Gorsa kanniin fudhadhuu irratti hojjadhu